Akukho mfihlelo yokuba indawo yokuqala phakathi kwezilwanyana zasekhaya emva kweekati kunye neenja zingama-hamsters. Ezi zilwanyana ezihlekisayo, ezinjengeentlanzi, zilula ukugcina kunye nokunyamekela, kwaye ziyakwazi ukuzisa uvuyo lwenene, zombini nomntwana wakho. Baya kufundisa ukunyamekela nokuthanda zonke izilwanyana. Kwaye ndiya kuzama ukukuxelela konke malunga nokukhetha nokugcina i-hamster.
Okokuqala, makhe sibone ukuba yeyiphi i-hamsters ekhoyo. I-hamsters eziqhelekileyo ezigcinwa ekhaya, sinama hamster aseSiriya. Ezi hamsters zifanele zigcinwe enye, kuba ukuba uhlala nesibini okanye amaninzi amaninzi, baya kulwa kwaye balwe nendawo kunye nokutya. Kwaye umzabalazo wokusinda kubo awukho ubomi, kodwa ukufa. Kodwa zilula kakhulu ukugcina kwaye kulula kakhulu ukuzenza. Ukunyamekela kwabo kuncinci.
Ngokuqhelekileyo kukho i-hamster yaseRussia kunye ne-hamster uRovskaya. Zizikhulu kuneSiriya, kodwa zixhomekeke ngakumbi kwiintsapho zazo. Ukuba ii hamster zihlala kwiinqununu eziliqela ukusuka ekuzalweni, ngoko zidibana ngokuzithandela. Hamsters zaseTshayina zihluke kakhulu ngokusuka kwii hamsters eziqhelekileyo. Zifana ne-dwarfish, nangona zingabalwa njenge-dwarfish. Kule mi hamster, umxholo omnye unokukhetha, nangona banobubele.
Yintoni endiyifunayo xa ndikhetha i-hamster? Ezi zinto zizinto ezibaluleke kakhulu eziya kuqinisekisa ukuba isilwanyana sakho siza kuhlala kunye nobomi obude kwaye obonwabileyo.
Okokuqala, qwa lasele ngomzimba we hamster. Kufuneka ukuba ibe neentleko, izihlamba, amanqatha. I-hamster enempilo inamandla, ivuya kunye ne-perky, kwaye ukuba ingakhathazeki, kukho iingxaki. Ewe, ukuba, ngokuqinisekileyo, akalala. Nangona i-hamster elalayo kufuneka ivuke ngokukhawuleza kwaye isabele njani kwiinguqulelo. Ubuluya bayo bufanele bube bubala, bubushelele, bunzima. Ngokukodwa ujonge i-contaminants malunga ne-anus, njengoko oku kungabonisa ukuhanjiswa okanye ezinye iingxaki zokugaya. Amehlo, impumlo kunye neendlebe zezilwanyana eziphilileyo kufuneka zihlambuluke kwaye zikhululeke ngeentonga. Gcina i hamster malunga nemizuzu elishumi. Kumele ukuba abonise umdla ngokucacileyo kuyo yonke into eyenzeka kuyo. Nangona kulunge ukhethe ukhetho olungasebenzi. Kwakhona, qwa lasela iimeko apho isilwanyana sigcinwe ngumthengisi. Ikhofu kufuneka ihlambuluke, ivule, inokutya okwaneleyo kunye namanzi. Kwaye akumele kubekho ezininzi izilwanyana kuwo. Emva koko, ukuba i-hamster igcinwe kwiimeko eziqhelekileyo, kuya kuba nesizathu esincinane sokusilimaza.
Le yimiqathango yokukhetha nasiphi na isilwanyana. Kwaye ukunyamekela i-hamsters yeentlobo ezahlukeneyo akufani nhlobo, ngaphandle kwimeko ukuba awukwazi ukugcina ii-hamsters ndawonye ngamaqela okanye nakwiibini. Zonke i-hamsters zihlala, ngokomyinge, malunga neminyaka emibini. Ngoko ke, kufuneka ulungele ukuba akukhoxesha elide lokuba lichithe kuluntu lwakho.
Ubungakanani bobuninzi bama hamster malunga neentimitha ezilishumi. Kukho izinto eziqhelekileyo, kodwa zikhona ii-hamsters ezincinci. Kukho umbandela womnatha.
Nazi ezinye iziphakamiso eziqhelekileyo zokunyamekela izilwanyana zakho:
Xa uthengwa, kufuneka ukhethe i-hamster encinane. Malunga nobudala bakhe kufuneka ucele umthengisi. Akufanele abe mdala kuneeveki ezintandathu. Uze ukhethe i-hamster ephuma kwinqanawa apho kwakungekho khona i-hamsters ezigulayo. Ekubeni ezi zidalwa zinyameko kwaye zinokutheleleka kalula kubantu babo.
Ukuba awuyizicwangciso zokuzala i-kennel hamsters, qwa lasela ukuthenga inkwenkwe okanye intombazana. Kwiivenkile ezizodwa i-hamsters zigcinwa ngokwahlukileyo kubantu bazo. Ukuba umthengisi akakwazi ukuchaza apho inkwenkwe ikhona, okanye apho intombazana ikhona khona, musa ukuthenga kule venkile. Ingxaki yonke kukuba ngenxa yokungazi, ungathenga i-hamster ekhulelwe. Emva koko unikezelwa umsebenzi wokuzalisa.
Ukugcina i-hamster uza kuyidinga igumbi, izinto eziphathekayo, ukutya nokusela, ukutya kunye namanzi, amathoyizi kunye nokuzonwabisa kwisilwanyana esincinane.
Umqolo kufuneka ube mkhulu, ukhululekile, apho i-hamster iya kuba nethuba lokugijima. Kwaye njengoko uya kuba lula ukuhlamba. Musa ukuthenga iiseli kunye neepayipi ezakhelwe ngaphakathi. Ayisebenzisekanga, kuba ubukhulu babo bukhulu kakhulu, kwaye kunzima ukuyihlutha.
Izikhefu phakathi kwemivalo kufuneka zincinci ngokwaneleyo. Kuba awukwazi nokuba nolwazi lwamanster ukufumana nayiphi na ithuba lokuphepha. Basebenzisa naluphi na ukungakhathali kwenu.
Ukugubungela kwinqanawa, sebenzisa i-sawdust, okanye, kwiimeko ezigqithiseleyo, ukukhahlela iphepha. Kodwa ngoku kukho i-granules ekhethekileyo ezithengiswayo kwi-sawdust ecinezelekileyo eyenza ngokugqibeleleyo umswakama kunye nempepho. Kodwa nangona usenza isigqibo sokusasaza i-cage yesilwanyana sakho nge-sawdust okanye i-granules, kufuneka unike ithuba lokuzenza i-mink, apho uya kulala khona emehlweni akho. Iphepha le-Toilet lifanelekileyo kule njongo. Unokubeka iinqununu ezinkulu, kuba i-hamster ngokwayo iyayiqhekeza kwiindawo zokumisa i-mink.
Ubomi obunempilo nobomi obonwabileyo be-hamster yindlela yokutya epheleleyo kunye neerhasi yokusela. Kukulungele ukuthenga imixube eyenziwe ngokulungelelanisiweyo eyenzelwe ngokukodwa ukunyusa iigundane. Zilungelelanise, kwaye ziqulethe zonke izinto eziyimfuneko ukukhula ngokugcwele kwe-hamster. Ukunciphisa oku kutya kunokutya kuphela imifuno nezithelo. Zifanele zihanjiswe kwiintlobo ezahlukeneyo, kodwa kungekhona ngokubanzi. Amanzi kufuneka abe ekhosini lonke ixesha. Kule njongo, thengela isitya esikhethekileyo sokusela. Kwaye ukutya kufuneka kube kwiitya ezinkulu, ukwenzela ukuba i-hamster ayikwazi ukujika kwaye isasaze zonke iziqulatho zegumbi.
Kwaye, ke, uyinyamekele ukuzizonwabisa kwilwanyana lakho. Oku kubaluleke kakhulu isondo. AmaHamsters awuthanda kakhulu lo msebenzi, kwaye asebenze ixesha elide, kwaye kakhulu ebusuku. Ngenxa yokuba ukhetha ivili alinanto. Okanye ubusuku obuthongo bunganikezelwa kuwe.
Kanti ama hamsters afana nokubetha amazinyo. Zonke iifowuni zokumaketha i-hamster ziya kucetyiswa kwisitoreji.
Kwaye ndinqwenela ukuba wenze ukhetho olungileyo kwaye ujabule kunye nezi zilwanyana ezivuya.
Ukutya onogwaja bokuhlobisa
Indlela yokukhetha isilwanyana
Indlela yokuguqula ikati ukudiliza ifenitshala?
Indlela yokucoca kakuhle iindlebe zezinja
Salat kunye noFotaksoy
Iifumba ezenziwe ngamanzi ngokugxininiswa kokutshatyalaliswa - i-pancake kunye nemifino, zokupheka kunye neefoto
Isidlo sokulahlekelwa kwesisindo esiphuthumayo: kutheni kungekho siphumo?
Izabelo zokuqala zabantu abadumileyo
Ulwabelana ngesini emva kokubeleka?
Yinambitha kwaye kulula ukupheka izitya zenyama
Iipropati eziwusizo zekhofi
I-mask-buckthorn ye-buckthorn yeenwele: izakhiwo ezixhamlayo kunye nekhenksi ekhaya
Iimpahla zoshishino zabasetyhini kwiofisi
Ngantoni na ngokukhawuleza ukukrazula iimpawu zokuqala ezibandayo kunye nezilwanyana zomntu?
Izizathu zokuba ungeke uqale inja
Ukunyamekelwa kwebusika kwesikhumba ebusweni